Pseodepigrafa (protestantisma) - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Pseodepigrafa (protetantisma))
Ny pseodepigrafa na soratra pseodepigrafa na boky pseodepigrafa dia ilazan'ny Protestanta ireo soratra sy boky ataon'ny Katolika hoe "apokrifa", izany hoe tsy isan'ny kanonan'ny Baiboly katolika. Izay ataon'ny Protestanta hoe soratra na boky apokrifa dia ireo izay lazain'ny Katolika hoe soratra na boky deoterokanonika. Voafetra ny isan'ny boky ataon'ny Protesnanta hoe apokrifa noho izy ireo voafetran'ny lisitry ny soratra sy boky deoterokanonikan'ny Baiboly katolika, fa ny lisitry ny soratra sy boky pseodepigrafa kosa dia tsy voafetra. Ireto misy ohatra amin'ny boky pseodepigrafa malaza: Bokin'i Henoka, Boky fahatelon'ny Makabeo, Boky fahefatry ny Makabeo, Salamon'i Solomona.
Ny teny nogasina hoe pseodepigrafa dia avy amin'ny teny grika hoe ψευδής / pseudḗs (izay midika hoe "sandoka" na "tsy marina") sy ny hoe ἐπιγραφή / epigraphḗ (izay midika hoe "soratra voasokitra" na "anarana"). Araka io hevi-teny voalohany io, ny soratra na boky pseodepigrafa dia soratra na boky lazaina ho nosoratan'olona izay fantatra fa tsy nanoratra azy.
Tsy araka io hevi-teny voalohany io tanteraka ny fampiharan'ny Protestanta io teny io amin'ny soratra na boky lazainy ho pseodepigrafa. Rehefa ataon'ny manampahaizana mantsy ny tsikera sy ny fanadihadiana ny nanoratana ny Baiboly dia hita fa maro ny soratra sy boky kanonika na apokrifa, araka ny fijery protestanta, ao amin'ny Baiboly izay mitondra anaran'olona malaza ao amin'ny Baiboly, dia anaran'olona heverina fa tsy nanoratra ireo boky ireo. Noho izany, raha ampiharina ny hevitra voalohan'ny teny hoe pseodepigrafa dia mety hahitana soratra na boky pseodepigrafa ny ao amin'ny Testamenta Vaovao.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseodepigrafa_(protestantisma)&oldid=972689"
Voaova farany tamin'ny 26 Jolay 2019 amin'ny 14:13 ity pejy ity.